Isi ihe na-mmepe nke oge a na ụlọ ọrụ bụ ụmụ mmadụ na-akpata. Naanị na a siri ike mmadụ akụ Nchikota nwere ike anyị na-achọ ndị na-adịte na ike mmepe nke ụlọ ọrụ. Shenyong ndị mmadụ esoro "ndị mmadụ na-agba mbọ" management nlereanya, n'ihi na dị iche iche nke talent na-enye a sara mbara n'elu ikpo okwu maka mmepe nke ụlọ ọrụ nwere ike ike uru.
Business nkà ihe ọmụma: ezi ochie, si ogologo oge na mgbalị na ebumnuche!
Were n'Ọrụ nghazi - anyị na-asọpụrụ ma na-azụ anyị ọrụ, agba ha ume isonye na management nke enterprise, enye a sara mbara ohere maka mmepe ha, na-akwalite nkwalite kacha mma ma na-ezere ikwu ha, na ịgba ndị mmadụ ume obula na-Frank na oghe.
Ahịa-akwanyere ùgwù-ihe ndị ahịa bụ ezi ezi mgbe nile, anyị nile bụ maka afọ ojuju nke ndị ọbịa, na anyị na-arịọ ngalaba nke oru aka na-eche ihu onye ahịa nkwurịta okwu, na-aghọta na ndị ahịa mkpa, ka mma-enye ndị ahịa uru ọrụ. Anyị ike a siri ike na omenala ikuku, ka ndị ọbịa na-eche dị na okpomọkụ nke n'ụlọ.
Ebumnuche: inye zuru ọrụ ka ọrụ na-eme ihe n'eziokwu na amamihe.
Ụkpụrụ: Professional n'ihi eyịre.